မြစ်ဆုံရေကာတာအတွက် အသင့်ရှိကြပါ | ပျူနိုင်ငံ
Posted by ကိုအောင် at 18:27
3 October 2011 at 18:33
ကိုအောင်ရေ ပြန်လင့်ခ်ပေးထားတာ ကျေးဇူးပါ..
မနိုင်းနိုင်းစနေ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ မြေပုံမှာ ပြထားတဲ့ လေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာ အညွှန်းမှားနေသလားလို့ (ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံ) Substationလို့ ထင်ပါတယ်..။ အမှတ်မှားမှာ စိုးလို့ပါ...
တရုတ်နဲ့ သင့်မြတ်နေတာထက် aganist လုပ်တာက မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ပိုပြီး ကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်။ အနောက်ကလူတွေနဲ့ အမြင်ကြည်လာနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပျော်ရွှင်နေတာ အမြန်ဆုံးမြင်ချင်ပါတယ်။
မလုပ်သင့်ဘူးထင်လို့ ဂတိကို ဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက် လျော်ကျေးပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေက ဘာမှကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး..။
တရုတ်တွေ ဘာပြောပြော သိပ်ဂရုမစိုက်သလို.. ချိန်းခြောက်မှုတွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်သင့်ဘူး..။
ချုပ်ဆိုပြီးသားစာချုပ်ကို ရဲရဲရင့်ရင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့နောက်မှာ ပြည်သူတွေရှိနေပါတယ်..။
အစ်ကိုအောင်ရေ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဧရာဝတီ စီးချင်းထိုးပွဲဟာ ဧရာဝတီ ထာဝရမလွတ်မြောက်သ၍ မပြီးဆုံးနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ
အခုလို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်သတင်းမျှဝေပေးနေကြတာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4 October 2011 at 02:09
ဧရာဝတီအတွက် ခုလိုနိုးနိုးကြားကြားဖော်ပြပေးနေတာ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော်တို.လည်းဒီဖက်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေပြီး လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ.အညံ့ခံမတဲ့လားဗျာ ။ ဧရာဝတီလေဗျာ.....ဒါကျွန်တော်တို.မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ. အသက်သွေးကြောဗျ ။ ဒီကိစ္စမှာ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ. ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုတယ် (မှတ်ချက် ။ ။ အရင်ဘယ်တုန်းကမှ သမ္မတကြီးလို.မခေါ်ဘူးပါ ။ အခုဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလို.ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာပါ။) လိုအပ်ရင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီး ပံ့ပိုးမယ်ဗျ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ပါဗျာ ။ ခင်လျှက်
4 October 2011 at 06:35
အမတို့ အားလုံး အမြင်မှန်မှန်နဲ့ အဆင်သင့်ရှိနေကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဧရာဝတီကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ တရုတ်ကို ထိုးမကျွေးနိူင်ဘူး။ ကျရာနေရာက အမြဲတမ်း ရယ်ဒီပါပဲ။
4 October 2011 at 07:07
တရုတ်ကို တိုက်ရလို့ကတော့ စစ်ထဲဝင်ဖို့လဲ ကျနော်လည်း ဝင်မလေးဘူး ။ တရုတ်ကို ရော်ကျေး ပေးရလဲ ဂယု မဆိုက် ဘူး။ နှစ် ၂၀ လား ရတယ်ရော်မယ်။
အေး လားရှိုး-မူဆယ် လမ်း တို့ကြိုင်းတုံ လမ်း တို့ မှာ အမေရိကန် F16,F15 တွေ ဆင်းလိုရအောင် လမ်း ပြင်မယ် လေယဉ်ကွင်း ပြင်မယ်။ ဒီမိုက်ရိုင်းတဲ့ တရုတ် နိုင်ငံ
ကိုလက်စားချေမယ်။ ပထမဆုံး နိုင်ငံ တွင်းမှာ တရုတ် ကိုကန့်ကွက် ပွဲ တွေလုတ် ပို့လိုလာပီ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုလာပီ။ သမ္မတ ကြီး ကို ထောက်ခံရမယ်။သမ္မတကြီးဖက်က ကျနော်တို့ ဝန်းရံ ပေးကြရလိမ့်မယ်။ ဒေါ်စု နှင့်တကွ ဘဘဦးတင်ဦး၊ဘဘ ဦးဝင်းတင် ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ် တော့နဲ့ အမြန်ဆုံး တိုင်ပင်ပါ။
တရုတ်ဆိုတာမြန်မာပြည်ရဲ့အနီးကပ်ရန်သူပဲ ၊ သူတို့လိုတာရရင်ထောက်ခံသလိုလိုနဲ့ မြန်မာ့သယံဇာတ တွေကို ကပ်ချိုင်မှာ သူတို့လိုတာမရရင် မြန်မာကို သူတို့လက်အောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာ၊ ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက မြန်မာပြည်ကို စစ်တွေအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခဲ့ဘူးတာ သက်သေပဲ၊ တိဗက်ကို သိမ်း၊ ရှိသမျှသူတို့နားကနယ်မြေတွေအကုန်လုံး သူတို့ဟာဆိုပြီး အနိုင်ကျင့် ဗီယက်နမ်နဲ့ ရန်ဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အငြင်းပွား ရှိသမျှပတ်ပတ်လည် လိုက်ငပွကြီးလုပ်နေတာ၊ အမေရိကန်က ငပွကြီးအစစ်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေက မှ အစစ်၊ မြန်မာပြည်ကိုလည်းသိမ်းချင်နေတာ ၊ အလျှော့ပေးစရာမလိုဘူး၊ စစ်တိုက်ရမယ်ဆိုလည်း တိုက်ပြစ်မယ်၊ ဒီကောင်တွေကို၊ တရုတ်လူမျိုးတွေကိုမမုန်းပါဘူး၊ သူတို့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ သူတို့ပေါ်လစီတွေက လူမဆန်လို့
4 October 2011 at 09:18